လိပ်စာမပါ,ပါ ပို့စ်ကိုပြန်လည် လင်းခန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လိပ်စာမပါ,ပါ ပို့စ်ကိုပြန်လည် လင်းခန်း
လိပ်စာမပါ,ပါ ပို့စ်ကိုပြန်လည် လင်းခန်း
Posted by The Angry Man on Sep 4, 2011 in Copy/Paste | 11 comments
လိပ်စာမပါ သတင်းစာ သံတွဲသားများအတွက်
ကဲဗျာ နားမလည်ဘူးဆိုတော့လဲ ပြောပြရမှာပေါ့ကွာ။
လွှတ်တော်ရဲ့ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေးနဝမမြောက်နေ့မှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ရီ ကို ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်က ဦးရွှေမောင်ကမေးပါလေရောဗျို့။
မေးတာက ဒီလိုပါ—ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဒေသမှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသောဒေသခံများသည် ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေးကိစ္စများအတွက်ရန်ကုန်မြို့သို့ခရီးသွားလိုလျှင် ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဒေသမှ စစ်တွေသို့ရောက်အောင် တရားမဝင်ပေးရငွေ ကျပ်၃သောင်းခန့်ကုန်ကျပြီး စစ်တွေမှရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်အောင် တရားမဝင်ပေးရငွေကျပ် ၄သိန်းကုန်ကျနေပါသဖြင့် ထိုကိစ္စကို ပပျောက်အောင် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ကို သိလိုကြောင်းမေးခွန်းကို ပြန်ဖြေတာကိုကြည့်ပါတော့ဗျ။
(၃)မြဝတီ၊မြန်မာ့အသံတို့ တွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများပြုလုပ်ပြီး တိုင်ကြားနိုင်သည့် တယ်လီဖုန်း၊ဖက်စ်များကိုတရားဝင်အသိပေးခြင်း
(၅)ဌာနပိုင် website လွှင့်တင်ခြင်း
ခုပြောသွားတဲ့အချက် ငါးချက်လုံးအားလုံးကောင်းတယ်ကွ။ ဒါပေမယ့်ခက်တာက နိုင်ငံတော်ရဲ့လွှတ်တော်အဆင့်မှာတောင် website လိပ်စာပေးမသွားဘူးကွာ။ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါကွာ။ အဲဒါကြောင့် တိုင်မယ့်လိပ်စာရပီ၊ပို့မယ့် ဖက်စ်နံပတ်ရပီ ဝမ်းသာတော့လို့ရွဲ့ပြောတာကို ငနာတကောင်က လိပ်စာမပါဘူးလာပြောနေတယ်။ ငါက နင်တို့အတွက်ပြောတာပါကွာ။
အေးဗျ ပြီးတော့ သူကဆက်ပြောပြသေးသကွ။
ဘာတဲ့. ဌာနအနေဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားသောညွှန်ကြားချက်များကိုသွေဖည်ဆောင်ရွက်တဲ့အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်း ၁၂ ဦးကို ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့ ကစပြီး စီမံချက်ကာလအတွင်းထုတ်ပယ်ခြင်း၊အဆင့်လျှော့ချခြင်း၊နယ်ပြောင်းခြင်းစသောအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းများကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုပါလား။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွ။ဒါပေမယ့်ပေါ့တိပေါ့ပျက်ဖြစ်နေတယ်ဗျ ဝန်ကြီးရေ။အောက်ဖိအထက်ဖားတော့မလုပ်ကောင်းတော့ဘူးနော့။
မပြီးသေးဘူးဗျို့ တဆက်တည်းဆက်ပြောပါသေးတယ်။ အထောက်အထားပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖော်ပြတိုင်ကြားပါက အရေးယူသွားရန် အသင့်ရှိပါကြောင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုနှင့်သန့်ရှင်းသောအစိုးရဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရေး အတွက်ကြိုးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်နေပါကြောင်းတဲ့ဗျာ။ ဟားဟား. (ခုနေအစိုးရကတော့ညစ်ပတ်နေတယ်လား?ဝန်ကြီးပြောတာနော်. ငါမဟုတ်ဘူး)
အေးဗျာပြောရင်းနဲ့ငါလဲ လေကြောရှည်သွားပီ။ဒီမှာတော့မသိဘူး။ ငါ့ကို ဟိုဘက်အိမ်က မျက်စောင်းထိုးနေပီ။ သူတို့သတင်းစာလေးငှားဖတ်နေရတာလေဗျာ။ ငါတို့သံတွဲကမီဒီယာဆရာများကိုတိုင်စရာလိပ်စာမပါတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုပေးချင်လို့ရေးလိုက်တဲ့ပို့စ်ပါကွာ။ ဝန်ကြီးတော့သိမသိ,မြင်မမြင်တော့ ငါမသိဘူးကွ။ငါကတော့မြင်တာကိုပြောတတ်တဲ့အကျင့်ကပါနေပီကွ။
ကဲဗျို့ရှင်းလောက်ပီထင်ပါတယ် သံတွဲသားတွေရေ—တိုင်ဖို့သာပြင်ကြပေတော့။ ဟုတ်ပီလား။ငါကတိုင်တဲ့ လူတွေကိုနားလည်သကွ။ ဒါပေမယ့် ခွေးကိုက်သလိုဝင်ကိုက်တဲ့ဂွစာတွေကိုတော့ ဘဝင်မကျဘူး။ လူနဲ့သူနဲ့တူတဲ့တုန့်ပြန်မှုမျိုးတော့မြင်ချင်သကွာ။
“” ကဲဗျို့ရှင်းလောက်ပီထင်ပါတယ် သံတွဲသားတွေရေ—တိုင်ဖို့သာပြင်ကြပေတော့။ဟုတ်ပီလား။ငါကတိုင်တဲ့ လူတွေကိုနားလည်သကွ။ဒါပေမယ့် ခွေးကိုက်သလိုဝင်ကိုက်တဲ့ဂွစာတွေကိုတော့ ဘဝင်မကျဘူး။လူနဲ့သူနဲ့တူတဲ့တုန့်ပြန်မှုမျိုးတော့မြင်ချင်သကွာ။””
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ယခုလိုမည်သို့ မည်ပုံ သင်ကြားပြသပေးမည်မသိရပါသောဆရာကိုတတ်ပ ကြီးရေ
ဘယ်လိုအတတ်ပညာမျိုးတွေနဲ့ ရေးထားလို့ HOME PAGE တွင်မပေါ်ရပါသလဲ။သင်ပေးပါဦးနော့။
မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာ၊ ပွဲလာဆူနေလို့ ဝင်ပြောရတာ၊ ကံ ကံ၏အကျိုးဆိုတာ လက်ငင်း
မညီ ဆို ဟုတ်ကိုမဟုတ်တာ၊ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်လာတဲ့ သကောင့်သားတွေ၊ ကိုယ်ကျိုးမပါ တဲ့
အကျိုးပြုတွေကို အမြဲရေး တတ်တဲ့ သူတွေကို အမြဲ ထောက်ခံ အားပေးနေပါမည်။
အထက်ဖါး အောက်ဖိ သော ငဖါးဖိ များကို ဆက်လက် ရှုံ့ချသွားပါမည်။
မှန်သောစကား များကို ရွေး၍ အမြဲ ပြောဆိုတတ်သူများ အများအကျိုးကိုဆက်လက်သယ်ပိုးနိုင်ကြပါစေ၊
မလိုမုန်းထား ဂုံးချောသူများ ဆက်လက်ကျရှုံးပါစေ၊
ကမ္ဘာသားအားလုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ။တရားဓမ္မ့ မေတ္တာစွမ်းလွှမ်းခြုံပါစေ။
ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးတွေ ရှိနေသမျှတော့ ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာ ရနိုင်မယ်မထင်သေးပါ…၊
ခလုပ်ထိမှ အမိတ သတိရကြမဲ့သူမျိုးတွေပါ…၊
နှောင်းမှ နောင်တရရင် နောက်ကျသွားပြီ ဆိုတာ သိရပါလိမ့်မယ်..။
ပို့စ်ပိုင်ရှင်ဟာ.. သူတင်တဲ့ပို့စ်ကို တာဝန်ယူရပါမယ်..။
အခုလို.. အပြန်အလှန် အမည်တပ်ပြောဆိုတာတွေဖြစ်လာရင်.. ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေတာ.. ဖြေရှင်းတာလုပ်ရပါမယ်..။ ဒါဟာ..တာဝန်ယူမှုကိုပြတာအပြင်..ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓါတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်..။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခများ ယခုလို မျိုးညစ်တီးညစ်ပတ်ဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမျိုးတွေကိုကျုပ်လဲမကြိုက်ပါဘူးဗျာ။ခုကိစ္စမှာ ဝင်ရောက်အော်ဟစ်နေသူများကိုလဲကျုပ်မသိကြောင်းပါ။မှတ်မှတ်ရရ ဗျို့ အရင့်အရင်က ပိတ်ခံရတဲ့ပို့စ်တွေတော့ကျုပ်မိတ္တူတွေဖတ်ဖူးသဗျ။ခုလိုမျိုးအရမ်းဝင်ဖျက်တဲ့ဂွစာတွေက ဘယ်သူစကျူးလွန်သလဲ ဝဘ်ဆိုဒ်လူကြီးမင်းများပိုသိပါလိမ့်မယ်။ကျုပ်ရေးတဲ့ပို့စ်တိုင်းမှာပါ,ပါနေကြပါ။
လူနဲ့သူနဲ့တူတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးမပေးတတ်ကြသောသူများသာအပြစ်ဖြစ်ကြောင်းပါ။ကျုပ်အနေနဲ့သူတို့ကိုမတတ်အောင်သင်ပေးမယ်ဆိုတာကလဲ ဒီကိစ္စကိုပြောတာဗျ။ခွေးဝင်ဆွဲသလိုဝင်ဆွဲကြသူတွေဘဲမှားသလား၊ပို့စ်တင်တဲ့ရပ်ရွာခံတွေဘဲမှားပါသလား ဆုံးဖြတ်ပေးပါဗျာ။
ရှက်တယ်ဗျာ သူတို့ပြောတဲ့နာမည်တွေလဲ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိဘူးဗျို့။ကျုပ်ကအသစ်ဝင်လာတာမကြာသေးပေမယ့်၊ဟိုအရင်လိုပိတ်ခံရတဲ့ပို့စ်တွေကတရားခံတွေကိုတတ်အောင်သင်ပေးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ရင်းအမှန်ပါဘဲ။အမှန်တိုင်းလေးစဉ်းစားပေးပါဗျို့။
ပြောရမယ်ဆိုရင် လူထု အကျိုးပြု ကောင်းနိုးရာရာ ပို့စ်လေးတွေ ရေးတင်ကြတဲ့အခါ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ ( အာဏာရှင် ) အုပ်စု
(အကျင့်ပျက် Group) ထဲမှ လူတစ်စု ဝင်ရောက် အမဲဖျက်ခြင်းပါ၊ သူတို့အကြောင်းတွေ ဘွားကနဲ့ ပေါ်မှာစိုးတာလဲ တစ်
ကြောင်း။ လူပုဂ္ဂိုလ် ရေးရာ စော်ကားလိုမှုက တစ်ကြောင်း စတဲ့ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် သဘောထားများကွဲလွဲ
ကျနော်ပြောချင်တာက တော့ မိမိ တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ် ဟာ ဗဟုသုတ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ လူထု အကျိုးပြုဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊
ပို့စ်တစ်ခုကို ဖတ်လိုက်ရင် အနဲဆုံးတော့ ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ကြမှာပါ။
အကျိုးပြု ပို့စ် ရေးသူများကို အမြဲ ထောက်ခံပါတယ်၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်သူများကို အက်ဒမင် (သူကြီး) မှ တားဆီးပေးနိုင်ခဲ့
ရင် ပိုကောင်းမယ် လို့ယူဆမိပါတယ် ။
ခုက ကျုပ်ပို့စ်မှာဟိုးတမြန်နေ့ကတွေ့ရတဲ့စာတွေမှာတော့ နှစ်ယောက်တော့တွေ့ပါတယ်။ခုအဲစာတွေဖျက်ပေးတာထင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးပါဗျို့။ဘယ်သူဘယ်ဝါတော့ မသိပေမယ့် မျှော်မြင်ကြီးကြီးထားဆုံးဖြတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျို့။ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျုပ်ပို့စ်လေးပိတ်ခံရမှာတော့ ကြောက်သဗျို့။